Amaokwu Baịbụl dị n’isiokwu a: Ezinụlọ -> Ndụ
 Ma Jisọs zara ya sị, “Onye bụ nne m? Òlee ndị bụ ụmụnne m?” Ọ tụrụ ndị na-eso ụzọ ya aka sị, “Lee, ndị a bụ nne m na ụmụnne m. Nꞌihi na onye ọ bụla na-eme ihe Nna m bi nꞌeluigwe chọrọ, bụ nwanne m nwoke, na nwanne m nwanyị, na nne m.”
 Nwoke ahụ jụrụ ya ajụjụ sị, “Olee iwu ndị m ga-edebe?” Jisọs zara sị ya, “Egbula mmadụ, akwala iko, ezula ohi, ekwula okwu ụgha. Sọpụrụ nna gị na nne gị. Hụ onye agbata obi gị nꞌanya dị ka onwe gị.”
1 KỌRINT 15:33-34
 Unu ekwela ka e duhie unu. Nꞌihi na ọ bụrụ na unu egee ndị na-ekwu ụdị okwu ahụ ntị, unu ga-ebido na-akpa agwa dị ka ha. Sitenụ na ndụ mmehie pụta! Unu emehiekwala ọzọ. Ùnu makwaara na ụfọdụ nꞌime unu amaghị Chineke? Ana m ekwu nke a ka ihere mee unu.
“Ọ bụrụ na unu ndị ajọ omume pụrụ inye ụmụ unu ezi ihe, unu echeghị na nna unu bi nꞌeluigwe ga-esitekwa otu a were Mmụọ Nsọ ya nye ndị rịọrọ ya?”